Wasiirka Arrimaha dibadda”Dowladda Seychelles dhawaan ayay nagu soo wareejinaysa maxaabiista” – Radio Muqdisho
Wasiirka Arrimaha dibadda”Dowladda Seychelles dhawaan ayay nagu soo wareejinaysa maxaabiista”
Mudane Yuusuf Garaad Cumar Wasiirka arrimaha dibadda ee Dowladda Soomaliya ayaa Xabsi ku yaalla Jaziiradda Mahé ee dalka Seychelles ku booqday 15 Soomaali ah oo halkaa ku xiran,kuwaasi oo ku xukuman sannado kala duwan ka dib markii lagu eedeeyey burcadbadeednimo.
Waxaa laga soo qabtay xeebaha Soomaaliya,Mid ka mid ah oo ay u dhammaatay muddadii lagu xukumay ayaa bisha Disembar 2017 la sii deyn doonaa,sida uu sheegay Wasiir Yuusuf Garaad oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Twitterka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Yuusuf Garad Cumar oo ka hadlayay xaaladda nololeed iyo qaabka loo daryeelo maxaabiistaasi ayaa yir”
“Inta ay xabsiga ku jireen waxay ku barteen af Ingiriis iyo xirfado dhowr ah,Intaa ka dib waxaan booqday 6 dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo ay ciidammada Midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya ilaaliyaa ay ka soo qabteen aagga Degmada Marka ee Shabeellada Hoose, toddobaadkii hore, dalkanna ku xirnaa afar maalmood,Waa dhallinyaro ku eedeysan burcadbadeednimo.”Ayuu intaasi kudaray Wasiirka.
Dhalinyaradaasi ayaa dhanka kale waxaa ay ku doodayaan in ay ahaayeen kalluumeysato,islamarkaana wax hub ah laguma arag doontooda,balse waxaa ay sheegeen in markii uu matoorka ka ciladoobey ay doontu ula sabeysay jeho kale.
Waxay ku soo xoomeen calanka Soomaaliya oo surnaa baabuurka la igu waday, iyaga oo ku dhawaaqaya – Soomaaliyeey toosa, toosa oo isku tiirsada,Berrito ayaan mar kale wadahadal la qaadan doonaa mas’uuliyiin sare oo dalkan Seychelles ah.” Wasiir Yuusuf Garaad ayaa hadaladaasi ku soo geba gebeyeey warbixinta ku aadan maxabiistaasi.
Qaramada midoobay oo gargaarkii ugu horeeyay geysay Yemen
Maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab oo ka qaxay degaano ka tirsan Gobolada Jubooyinka iyo Shabeellaha Hoose